विद्यालयका प्राचार्यहरुलाई अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीेले गरे यस्ताे आग्रह
क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री मालकोम टर्नबुलले अष्ट्रेलियाका सबै विद्यालयका प्राचार्यहरुलाई विद्यालयका छात्रछात्राहरुलाई शिक्षणका क्रममा कुनै पनि धम्कीपुर्ण कारबाही नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
अस्ट्रेलियालीका उपप्रधानमन्त्री वार्नबी जोयस यस्ताे समस्यमा
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियामा आफ्नै पार्टी कार्यालयमा काम गर्न एक युवतीसँगको प्रेम र उनीसँगको सम्बन्धपछि अस्ट्रेलियालीका उपप्रधानमन्त्री वार्नबी जोयस समस्यमा परेका छन् । उपप्रधानमन्त्री जोयसको पार्टी कार्यालयी कर्मचारी भिक्की क्यापिनसँग प्रेमसम्बन्ध रहेको केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो ।
सिड्नी, अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियमको न्यू साउथ वेल्स राज्यको राजधानी सिड्नीमा भवन निर्माणाधिन क्षेत्रमा मङ्गलबार भएको आगलागीमा परी कम्तिमा १३ जना घाइते भएको यहाँका अधिकारीले जनाएका छन् ।
अष्ट्रेलियाका ब्याङ्क तथा वित्तीय सेवाहरूमा हुने गलत कामबारे ठुलाे छानबिन शुरू
बिबिसी । अष्ट्रेलियाका ब्याङ्क तथा वित्तीय सेवाहरूमा हुने गलत कामबारे एउटा महत्त्वपूर्ण छानबिन शुरू भएको छ।
अष्ट्रेलियन वैज्ञानिकहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अनुसन्धान गर्ने
क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाली बैज्ञानिकहरुले हालैका दिनमा यहाँ देखा परिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा गहन अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।
चीन अष्ट्रेलिया विवादः सुध्रेला त सम्बन्ध ?
सिड्नी । चीन र अष्ट्रेलियाबीच देखिएको विवाद दुई देश एक अर्काको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेपछि चुलिंदो छ ।
अष्ट्रेलियामा 'उत्तर कोरियाली एजेन्ट' माथि मुद्दा...
बिबिसी । सिडनीमा एकजना पुरुषलाई उत्तर कोरियाका लागि 'एजेन्ट'को काम गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको अष्ट्रेलियाको संघीय प्रहरीले बताएको छ। चान हान च्वेमाथि देशबाट हतियारको अवैधानिक निर्यात
अष्ट्रेलियनहरुलाई विदेशीहरुले हेर्ने ११ पुराना रोचक दृष्टिकोणहरु !
कसैलाई सोध्नुहोस् जो विदेशमा बसिरहेको छ । उनीहरुले दाबी गर्दै भन्छन् अष्ट्रेलियनहरु ठूलो शानका साथ लाउड र रिल्याक्स शैलीमा बस्छन् तर उनीहरु बस्ने वातावरण भने डरलाग्दो रहेको छ । तर, अष्ट्रेलियाको जीवन सधै रामसे सेन्टको ‘होम एण्ड अवे समर बे ओर निबर्स’ जस्तो छैन ।
अष्ट्रेलियामा बाल यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी यस्ताे रिपाेर्ट सार्वजनिक भएपछि...
बिबिसी । अष्ट्रेलियामा बाल यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी एउटा जाँचबुझ संयन्त्रले पाँच वर्ष लगाएर आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
सिड्नीमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कन्सर्टपछि आइडल टोलीको अनुभवः ‘ठुलो कन्सर्टमा मज्जै वेग्लै’
सिड्नी । अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको नेपाल आइडल टोलीले हालै सिड्नी कन्सर्ट सकाएको छ ।
यस्ता छन् अष्ट्रेलियाका आश्चर्य लाग्दा कानुनहरु !
एजेन्सी । हरेक देशका आफ्नै नियम कानुन रहेका छन् । जसलाई जान्नु आवश्यक छ । तर, कतिपय कानुन यति आश्चर्य लाग्दा छन् कि तपाईलाई विश्वास गर्न निकै कठिन हुनेछ । कुनै देशमा विवाह पुर्व